DAAWO VIDEO DHACDO YAAB LEH:-Aabe Soomaaliyeed Oo Si’an La Arag U Diley Wiil Islantisa Dhashay Iyo Xukun Adag Oo Lagu Xukumay - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxkamad ku taal magaalada Buffalo, New York ee dalkaas Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inay ku riday xukun nin Soomaali ah oo horey u dilay wiil yar oo 10 sano jir ah oo uu adeer u ahaa ka dib markii uu wiilkaas u garaacay si xunA oo naxariis daro ah taas oo keentay inuu wiilkaas uu u dhintey garaacidaas.
Cali Maxamed Maxamud oo 41 sano jir ah ayaa waxaa la sheegay inay maxkamadu ay ku xukuntay xabsiga ugu sareeyo kaas oo ah 25 sanadood ka dib markii uu ku cadaatey inuu dilay wiil yar oo uu adeer u ahaa oo lagu magacaabi jirey Cabdifataax Maxamuud oo 10 sano jir ahaa, nin kaan ayaa waxaa la sheegay inuu wiilkaan yar intuu afka kaga gurey iskaalshooyin oo uuna ka sharootooyin isllamarkaana uu ku xir xiray fiilo uu wiilkaas yar si naxariis daro ah uu ugu garaacay garuun asagoona la cadeeyey.
inuu in kabadan 70 jeer uu wiilkaas la dhacay garuunkaan oo uu digada kaga dhigay taas oo keentay inuu wiilkaas uu u dhinto garaacidaas, ninkaan oo aan la ogeyn sababta dhabta ah ee uu u dilay wiilkaasa ayaa lagu sheegay inuu ka xanaaqay ka dib markii uu wiilkaas yar ka seeg seegay waxbarashada, asagoona uu ninkaas sheegay inuu jeclaa inuu wiilkiisa uu noqdo mid mustaqbal wanaagsan yeesho.
Ugu damneyntiina iyadoo ninkaasi oo maxkamada horteeda ka hadlay uu ku calaacalay inuu ka xun yahay waxa dhacay islamarkaana uu ujeedkiisa ahayn inuu dilo wiilkaas yar ee uu adeerka u yahay islamarkaana bilihii la soo dhaafay ay u ahaayeen kuwo ku reebay murugo xun ayuu sidoo kale waxaa uu raali galin buuxda ka bixiyey falka xun ee uu sameeyey.
Hooyada dhashay wiilkaas la silay oo lagu magacaabo Shukri Bile ayaa waxay ku tilmaamtey waxa dhacay wax aad iyo aad u xun iyadoona sheegtay in qof ay aamintey ay kala kulanto dhibaatadaas oo kale ay tahay wax laga xumaado, Falka uu ninkaan ku kacay ayaa waxaa la yaab ka muujiyeye xeer ilaaliyaha guud ee kiiskaan ninka lagu magacaabo Frank A. Sedita asagoona ku tilmaamay kiisaskii ugu xumaa ee soomara mudo ka badan 24 sanadood oo ku gudo jirey shaqadaan.
Halkaan Ka Daawo Videoga Dhacdadan Layaabka Leh.